Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Umnyango Wezokuvakasha WaseHawaii uvuleke kakhulu
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • I-HITA • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Kusukela kusasa, ngoJulayi 8, 2021, abahambi basekhaya abaza eHawaii bangangena esifundazweni futhi badlule ukuhlolwa kwe-COVID-19 nokuhlukaniswa lapho befika uma benepasipoti yokugoma ekhishwe yi-CDC ukuqinisekisa ukuthi bagonywe ngokuphelele.
Lokhu kumenyezelwe esithangamini nabezindaba esisanda kuphetha esikhumulweni sezindiza i-Daniel K. Inouye.
Umbuso ukuqinisekisile ukuthi imizamo yaseHawaii ayenziwa ngokubambisana nemihlahlandlela yegunya lenhlangano.
Abahambi abagonywe e-US noma ezindaweni zayo bangabamba iqhaza kulolu hlelo kusukela ngosuku lwesi-15 ngemuva komthamo wesibili womuthi wokugoma wePfizer noma weModerna noma umthamo owodwa womuthi wokugoma kaJohnson & Johnson.
Abahambi abagonywe e-US noma e-US Territories bangabamba iqhaza ohlelweni oluhlukile kusukela ngosuku lwesi-15 ngemuva komthamo wabo wesibili womuthi wokugoma wePfizer noma iModerna - noma ukuqala kosuku lwe-15 ngemuva kokuthola umthamo owodwa womuthi wokugoma kaJohnson & Johnson.
Lapho ebuzwa ngu eTurboNews, kwenziwa kwacaca ukuthi imigomo yokugoma ayemukelwa yiziphathimandla zakwamanye amazwe.
Abahambi ababoshiwe eHawaii bazodinga ukulayisha omunye wemibhalo emithathu yokugoma ku-akhawunti ephephile ye-Safe Travels eHawaii abayimisile, ngaphambi kokuhambela iziqhingi. Enye yemibhalo elandelayo kufanele ilayishwe:
Ikhadi lokuqopha i-CDC COVID-19.
Ukuphrinta kwe-VAMS (Vaccination Administration Management System).
Ifomu le-DOD DD 2766C.
Ipulatifomu yedijithali ye-Safe Travels izocela ubufakazi obusemthethweni obuku-intanethi kuwebhusayithi yayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi imibhalo elayishiwe iyiqiniso futhi inembile.